Fsnd ILS N'ezie ọnọdụ?
Fsnd ILS N'ezie ọnọdụ? 3 afọ 1 ọnwa gara aga #644
Hụ m ọzọ.
M ebudatara igbe nkpozi elu maka 747 ahụ na-adọrọ adọrọ na ya dị mma, ma naanị nsogbu m nwere bụ mgbe m chọrọ ịtọ maka ebe ILS na-aga n'ebe ahụ adịghị ka ọ bụ ụzọ ọ bụla iji dozie isi okwu, na igbe ọkpọ n'elu ị debere ya site na igosipụta ma ebe ọ bụ na onye ọhụrụ ahụ nwere usoro gpws ya ebe ọ nọ n'ebe ahụ.
Kedu ka ị si eme ya?
(Dezie) Ọ bụ nke a. www.rikoooo.com/downloads/viewdownload/55/568
Ndumodu ikpe azu: site ricsmi.
Fsnd ILS N'ezie ọnọdụ? 3 afọ 1 ọnwa gara aga #645
Anaghị m enwe nsogbu dịka mgbe ana-ekpochi ya na ILS, ebe ọ na-eduzi onwe ya na njide glidelope.
naanị ị ga-edozi NAV1 na freq kwesịrị ekwesị, ma gbanwee usoro ojiji site na GPS ruo NAV (Enwere m CTRL + SHIFT + N) maka nke a ka m wee ghara iji òké.
ma gbanwee ka igodo nso
Fsnd ILS N'ezie ọnọdụ? 3 afọ 1 ọnwa gara aga #646
Oh ok, m na-eche banyere N'ezie ọnọdụ, mma ịmara na dị ka ọ pụtara obere faffage n'oge ọdịda. xd
Fsnd ILS N'ezie ọnọdụ? 3 afọ 1 ọnwa gara aga #647
Ee ka m na - etinye Nav 1 ka ọ bụrụ ezigbo freq, ma mgbe m na-eh .... na 20mi nke ọdụ ụgbọ elu ma jikọta ya na ọsọ ọsọ (amasị m ogologo oge) na gburugburu FL300, m ga-agbanye ya na GPS na Nav, ma ọ bụrụ na "bọọlụ" ahụ gosipụtara, m ga-atụgharị ya na VOR LOC (ọ dịkarịa ala m chere na ọ bụ ihe ọ na-ekwu LOL M nọ na CS C-130 n'oge lol), ka APP ma hapụ ya ka o duzie M. Ọ BỤRỤ na m dị elu, m ga-eme ka m kwụsị ịdị elu ruo mgbe ALT HLD gachara na-aga, ebe m na-aga ịnyagharị lol
Oge ike page: 0.266 sekọnd